Puntland iyo Jubbaland oo ka maqan shirka Muqdisho ka furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland iyo Jubbaland oo ka maqan shirka Muqdisho ka furmay
Maamullada Puntland iyo Jubbaland ayaa beeniyay in ay qeyb ka yihiin shirka heer wasiir ee maanta la sheegay inuu ka furmay garoonka diyaaradaha ee Aadan cadde.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shir ay isugu yimaadeen guddi farsamo, oo wasiiro ah loogana hadlayo hanaanka doorashooyinka dalka, isla markaana daba socda shirkii magaalada Baydhabo ayaa ka socda huteelka Decala ee Garoonka Aadan Cadde.
Shirkaan ayaa la sheegay, inuu yahay wajiga labaad ee wasiiradaan ku kulmaan, waxaana looga hadlayaa arrimo la xariira doorashooyinka, iyo sidii loo karkarin lahaa waxyaabaha looga doodi doono shirka Madaxda DF iyo kuwa Maamul goboleedyadu dhawaan ku yeelanayaan Muqdisho.
Hayeeshee Maamullada Puntalnd iyo Jubbaland ayaa beenayay in ay qeyb ka yihiin shirka, Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, ayaa yiri. ““Ma jiro wax shir wadatashi arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ah oo wali ka furmay Muqdisho”
Sidoo kale, Wasiir Dowlaha Madaxtooyada Jubbaland,ayaa sheegay in aysan qeyb ka ahayn shirka, “Jubbaland qeyb kama ahan kamana war heyso wax shir ah oo u furmay guddi farsamo oo hour dhac u ah shirka ka danbeeya” ayuu yiri Xirsi Gaanni.
Farmaajo ayaa gadaal ka riixaya hab kasta oo lagu fashin karo shirka weyn ee la filayo inuu dhawaan dhaco, wuxuu taas cadaadis xoogan ku saarayaa Maamuladda Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur Galbeed.